Geostorm (2017) | MM Movie Store
ဒီရုပျရှငျကားကို စကွညျ့မိတဲ့ အခြိနျဘာကို သတိရမိလဲ ဆိုတော့အရငျက သဘာဝဘေး အကွောငျးရုပျရှငျတှေ ရိုကျပွီးရငျ အပွငျမှာလဲဆူနာမီ လို မုနျတိုငျးတှေ တိုကျခတျပွီးတကယျဖွဈဖွဈသှားတာ လနျ့လှနျးလို့ရှပွေ့ေးနိမိတျ ရုပျရှငျမဟုတျပါစနေဲ့ အရငျဆုတောငျးရတယျကဲ ဇတျလမျးအကွောငျး နညျးနညျးပွောပွမယျ….
ဒီရုပျရှငျကားကို Director: Dean Devlin က ရိုကျကူးခဲ့ပွီးOctober 11, 2017 မှာ ရုံတငျပွသခဲ့တယျ…Budget ကို 120 million USD နဲ့ ရိုကျကူးခဲ့ပမေယျ့ Box office မှာ184.4 million USD အထိ ရရှိခဲ့တယျIMDb 5.6 သာ ရရှိထားပမေယျ့ ကနြေျာ့စိတျနဲ့ ဆို 7.0 လောကျထိပေးခငျြပါတယျ
ဒါဆို ဒီရုပျရှငျဘယျလောကျကောငျးတယျဆိုတဲ့ အညှနျးမလာသေးခငျကွညျ့ရတာ တနျတယျဆိုတဲ့ ခံစားခကျြ တဈခုပဲ ရှိသေးတယျနျော=====================
ဇတျလမျးပုံစံကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ ကမ်ဘာအဝှမျး ရာသီဥတုဆိုးရှားပကျြဆီးမှုတှေ နဲ့ ကွုံတှလေ့ာခဲ့ရတာကို စတငျပွသထားပွီးအဲ့ဒီ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးတာတှကေို ကာကှယျဖို့ အတှကျဂြိတျ နဲ့ မတျ ဆိုတဲ့ ညီအကို ၂ ယောကျက နိုငျငံတကာကသိပ်ပံပညာရှငျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ဒကျချြဘှိုငျး ဆိုတဲ့ စနဈတဈခုကိုဖနျတီးခဲ့ပွီး အာကသ ထဲတှငျ စခနျးတညျဆောကျကာသကျဆိုငျရာ နိုငျငံတှေ ရဲ့ ရာသီဥတုတှကေို လိုကျလြောညီထှစေရေနျဆောငျရှကျအောငျမွငျခဲ့ကွပါတော့တယျ….
ဒီလိုနဲ့ တဈရကျမှာတော့ ဂြိတျ ဦးဆောငျခဲ့တဲ့ ဒကျချြဘှိုငျး စနဈကိုနာဆာ လကျအောကျကို ရယူဖို့အတှကျ ဂြိတျ ကို အလုပျဖွုတျပွီးစနဈ နဲ့ ဝေးရာကို တှနျးပို့ခဲ့ကွပါတော့တယျဂြိတျမရှိတဲ့နောကျမှာဂြိတျ ရဲ့ ညီ ဖွဈသူ မတျ က စနဈကို နာဆာ လကျအောကျမှ တဆငျ့ဦးဆောငျရငျး ၃ နှဈခနျ့ ကွာသော အခါမှာတော့….
နာဆာ ရဲ့ ဒကျချြဘှိုငျး ဂွိုလျတု တဈခုဟာ အာဖဂနျနဈစတနျ ရဲ့သဲကန်တာရ တဈခုထဲက မွို့အပျေါကခြဲ့ပွီး တဈမွို့လုံး ရခေဲပွီးအကုနျအေးခဲသသှေားကွတယျ…အဲ့ဒီလို ဖွဈပွီး ဟောငျကောငျ မှာလဲ အပူရှိနျလှနျကဲကာဂဈလိုငျးတှေ ပေါကျကှဲတဲ့ သတငျး ဖွဈပှားခဲ့ပွနျတယျ
အဲ့ဒီသတငျးကွောငျ့ ဒကျချြဘှိုငျး ကို ဦးဆောငျနတေဲ့အဖှဲ့ဟာအလုပျတှရှေုပျပွီး ဘာကွောငျ့မှနျး အဖွရှောမရ ဖွဈခဲ့တယျဒီလိုနဲ့ မတျ ဟာ ဒီစနဈကို စတငျဦးဆောငျတညျဆောကျခဲ့သူသူ့အကို ဂြိတျ ကို နာဆာ ကို ပွနျလာပွီး ဒီ ပွသနာတှကေို အဖွရှောဖို့ပွနျလိုကျရှာချေါရပါတော့တယျ
ပထမတော့ ဂြိတျ ဟာ ဒီကိစ်စတှနေဲ့ဝေးဝေးနခေငျြပမေယျ့ သူ့ဘ၀ တဈခုလုံးနီးပါး ရငျးပွီး အခြိနျပေးခဲ့တဲ့ဒကျချြဘှိုငျး ရဲ့ ပွသနာကို အဖွရှောဖို့ ပွနျလကျခံခဲ့ပါတယျ…
ဂြိတျ တဈယောကျ နာဆာ မှ တဆငျ့ အာကသ ထဲက ဒကျချြဘှိုငျးစနဈတညျရှိရာ စခနျးသို့ ရောကျသှားခြိနျမှာတော့ သူ့ညီ မတျထငျနခေဲ့သလို ဒကျချြဘှိုငျး ရဲ့ စနဈခြို့ယှငျးမှု မဟုတျပဲအမညျမသိ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ မိုးလဝေသ ထိနျးခြုပျတဲ့ စကျအပျေါလူသတျလကျနကျ အဖွဈ အသုံးခနြတေဲ့ အဖွဈမှနျး သိရှိသှားခဲ့သောအခါ…..
ရုပျရှငျကား ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁ နာရီ ၄၀ မိနဈ ခနျ့ ရှိပွီးAction, Sci-Fi, Thriller အမြိုးအစား ဖွဈလို့ ဇတျလမျးစတငျခြိနျမှဇတျလမျးအဆုံးသတျခြိနျထိ ရငျတမမ သညျးထိတျရငျဖို ကွညျ့ရှုရမယျ့ရုပျရှငျကားကောငျး တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို စကြည့်မိတဲ့ အချိန်ဘာကို သတိရမိလဲ ဆိုတော့အရင်က သဘာဝဘေး အကြောင်းရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ပြီးရင် အပြင်မှာလဲဆူနာမီ လို မုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်ပြီးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ လန့်လွန်းလို့ရှေ့ပြေးနိမိတ် ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါစေနဲ့ အရင်ဆုတောင်းရတယ်ကဲ ဇတ်လမ်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြမယ်….
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Director: Dean Devlin က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးOctober 11, 2017 မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တယ်…Budget ကို 120 million USD နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် Box office မှာ184.4 million USD အထိ ရရှိခဲ့တယ်IMDb 5.6 သာ ရရှိထားပေမယ့် ကျနော့်စိတ်နဲ့ ဆို 7.0 လောက်ထိပေးချင်ပါတယ်
ဒါဆို ဒီရုပ်ရှင်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အညွှန်းမလာသေးခင်ကြည့်ရတာ တန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက် တစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ်နော်=====================
ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာအဝှမ်း ရာသီဥတုဆိုးရွားပျက်ဆီးမှုတွေ နဲ့ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတာကို စတင်ပြသထားပြီးအဲ့ဒီ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်ဂျိတ် နဲ့ မတ် ဆိုတဲ့ ညီအကို ၂ ယောက်က နိုင်ငံတကာကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒက်ခ်ျဘွိုင်း ဆိုတဲ့ စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး အာကသ ထဲတွင် စခန်းတည်ဆောက်ကာသက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ ရာသီဥတုတွေကို လိုက်လျောညီထွေစေရန်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်….
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ဂျိတ် ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဒက်ခ်ျဘွိုင်း စနစ်ကိုနာဆာ လက်အောက်ကို ရယူဖို့အတွက် ဂျိတ် ကို အလုပ်ဖြုတ်ပြီးစနစ် နဲ့ ဝေးရာကို တွန်းပို့ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဂျိတ်မရှိတဲ့နောက်မှာဂျိတ် ရဲ့ ညီ ဖြစ်သူ မတ် က စနစ်ကို နာဆာ လက်အောက်မှ တဆင့်ဦးဆောင်ရင်း ၃ နှစ်ခန့် ကြာသော အခါမှာတော့….
နာဆာ ရဲ့ ဒက်ခ်ျဘွိုင်း ဂြိုလ်တု တစ်ခုဟာ အာဖဂန်နစ်စတန် ရဲ့သဲကန္တာရ တစ်ခုထဲက မြို့အပေါ်ကျခဲ့ပြီး တစ်မြို့လုံး ရေခဲပြီးအကုန်အေးခဲသေသွားကြတယ်…အဲ့ဒီလို ဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင် မှာလဲ အပူရှိန်လွန်ကဲကာဂစ်လိုင်းတွေ ပေါက်ကွဲတဲ့ သတင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်တယ်
အဲ့ဒီသတင်းကြောင့် ဒက်ခ်ျဘွိုင်း ကို ဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဟာအလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ဘာကြောင့်မှန်း အဖြေရှာမရ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ မတ် ဟာ ဒီစနစ်ကို စတင်ဦးဆောင်တည်ဆောက်ခဲ့သူသူ့အကို ဂျိတ် ကို နာဆာ ကို ပြန်လာပြီး ဒီ ပြသနာတွေကို အဖြေရှာဖို့ပြန်လိုက်ရှာခေါ်ရပါတော့တယ်
ပထမတော့ ဂျိတ် ဟာ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဝေးဝေးနေချင်ပေမယ့် သူ့ဘ၀ တစ်ခုလုံးနီးပါး ရင်းပြီး အချိန်ပေးခဲ့တဲ့ဒက်ခ်ျဘွိုင်း ရဲ့ ပြသနာကို အဖြေရှာဖို့ ပြန်လက်ခံခဲ့ပါတယ်…
ဂျိတ် တစ်ယောက် နာဆာ မှ တဆင့် အာကသ ထဲက ဒက်ခ်ျဘွိုင်းစနစ်တည်ရှိရာ စခန်းသို့ ရောက်သွားချိန်မှာတော့ သူ့ညီ မတ်ထင်နေခဲ့သလို ဒက်ခ်ျဘွိုင်း ရဲ့ စနစ်ချို့ယွင်းမှု မဟုတ်ပဲအမည်မသိ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မိုးလေဝသ ထိန်းချုပ်တဲ့ စက်အပေါ်လူသတ်လက်နက် အဖြစ် အသုံးချနေတဲ့ အဖြစ်မှန်း သိရှိသွားခဲ့သောအခါ…..
ရုပ်ရှင်ကား ကြာမြင့်ချိန် ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ် ခန့် ရှိပြီးAction, Sci-Fi, Thriller အမျိုးအစား ဖြစ်လို့ ဇတ်လမ်းစတင်ချိန်မှဇတ်လမ်းအဆုံးသတ်ချိန်ထိ ရင်တမမ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှုရမယ့်ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်